,. ,,. , -. .
. ,. ,. .!
1 Beka amazwana!
Ngaphambi kokuqala ukuxhumana, kufanele ukhombise ubulili bakho, bese ucacisa ukuthi yibuphi ubulili ongathanda ukukhuluma nabo. Ngemuva kwalokho inkinobho ethi "Sesha" icindezelwe bese umuntu wokuqala esivele avele esikrinini esiphezulu. Esikrinini esingezansi ubona isithombe sakho. Uma ufuna ukukhuluma nomunye umuntu, vele uchofoze inkinobho ethi "Okulandelayo". Imilayezo ingashintshwa ewindini elikhethekile engxenyeni engezansi kwesokudla yenkambu ngokusetha noma ukuguqula umsindo wezaziso. Ungase futhi ubone ukuthi bangaki abantu ngasikhathi esithile abaxhumana kulesi siza.
Izinzuzo zengxoxo yevidiyo yaseRussia "Ake sixoxe"
Le nsizakalo inezinzuzo eziningi: amandla okwenza abangane abasha. Vuma ukuthi ukwenza abangane abasha kuhlale kumnandi! ithuba lokungakhulumisani ngamazwi noma ngokubhala, kepha futhi nokucabangisisa ngomdlwenguli. Akudingeki uthole ukudumazeka okungathandeki emhlanganweni wesikhathi esizayo, ngoba ukuxhumana kwenziwa cishe bukhoma. ukwenza izinto zibe lula nokusebenziseka kalula. I-video ethi "Asikhulume" ixoxe nge-inthanethi isebenza ngendlela engahleliwe yokuqomisana, ngakho-ke uma ngasizathu simbe umuntu angajabuli nawe, ungavele uqhubeke nokufuna abantu okhuluma nabo ngokuchofoza inkinobho ethi "Okulandelayo". ukuntuleka kwesidingo sokubhalisa nedatha yomuntu siqu. Leli qiniso lisiza kakhulu inqubo yokwazi insizakalo futhi lisheshise ukuqala kokusetshenziswa, ngaphezu kwalokho, liheha abasebenzisi abaningi abangafuni ukuchitha isikhathi ezintweni ezinjalo.
Ngubani ohlezi engxoxweni yevidiyo engaziwa ukuthi "Asikhulume"
ingxoxo yevidiyo yangaphandle
I-service yethu ayiniki sizathu sokuthola ukubhejwa nanoma ngubani, ngoba engxoxweni ungahlala uhlangana nabantu abadala nabantu abathakazelayo abanele abalungele ukujwayelana, izingxoxo ezithakazelweni futhi, mhlawumbe, ngamaprankiya alula. Kungakho ingxoxo yevidiyo ethi "Masikhulume" idume kangaka kubantu beminyaka ehlukene nabobulili obuhlukile. Abasebenzisi abaningi baqonda kudala ukuthi ingxoxo yevidiyo yaseRussia ethi "Masikhulume" iyinsiza elula, elula futhi elula enikeza ithuba elihle lokuhlangana nalabo abangajwayele ukwenza lokhu emigwaqweni, emigoqweni, kumakhofi nakwezinye izindawo zomphakathi. Usebenzisa isiza esifanayo, uthola ithuba lokukhombisa ukungahambi kahle, thokozisa umhambisi wakho nge-charm bese uthola umlingani womphefumlo. Njengengxoxo yevidiyo ethi "Ake sixoxe" amantombazane nabafana - bonke labo abazimisele ukuzibeka engcupheni encane futhi banikeze ithuba kulowo mcimbi. Izinhloso zabo bonke abavakashi zihlukile, kepha asingabazi ukuthi ekusebenzeni kwethu ungahlangana nalabo obabeka empilweni yakho, futhi, mhlawumbe, enhliziyweni yakho.Uma unesithukuthezi, uma kungekho mood, uma ufuna ukuthwebula kalula noma ukuxhumana okuqotho, zizwe ukhululekile ukuya ezingxoxweni zethu! Ngikholwe: impilo yakho izothakazelisa ngokwengeziwe!
I-roulette yengxoxo yevidiyo ye-
: xoxa mahhala
Ukuxhumana kuyinani elikhulu kakhulu kumuntu wesimanje. Impilo yethu iyinkimbinkimbi futhi kwesinye isikhathi, ngaphezu kokuxhumana okubonakalayo, alikho elinye ithuba lokukhuluma nabanye abantu, ukuxoxa ngezinkinga ezithile, futhi nje ukwaba okungaphakathi. Izici zokuxoxa ngevidiyo zeRoulette zikuvumela ukuba uthole i-interlocutor kunoma iyiphi ingxenye yezwe futhi ugcwalise izikhala ekuxhumaneni kalula futhi kalula. Khuluma ngengxoxo yevidiyo lapho kufaneleka futhi kudingekile kuwe!
Igama elisha "ingxoxo": liyini iphuzu?
Ufuna ukwazi ukuthi yini eheha abantu abaningi kuleli gama elisha? Eqinisweni, konke kulula kakhulu futhi kucacile:
injabulo yokuxhumana nabantu abathakazelayo;
Ingxoxo yevidiyo engu-
, ekuvumela ukuthi udale inkohliso yokuxhumana komuntu siqu ebhentshini lepaki noma etafuleni le-cafe;
indlela yokusebenzisa isikhathi sakho sokuzilibazisa iyathakazelisa futhi iyathakazelisa;
amandla okuthola i-interlocutor yezintshisakalo - umthandi wama-movie noma izincwadi, ezinye izihloko.
Videochat Roulette ihlanganisa ndawonye izinkulungwane zabasebenzisi, futhi leli yinani layo eliyinhloko. Ngaphezu kwalokho, le ngxoxo isesigabeni lapho intuthuko yenzeka nsuku zonke, futhi konke lokhu ndawonye kwenza ukuxhumana kungabi komile futhi kungabi namibala, kodwa kube ngokoqobo, kuphaphathekile, kufakwe phakathi. Ngengxoxo yevidiyo ka-Roulette uzokwazi ukugqama kusihlwa esidabukisayo sekwindla lapho imvula igudla khona lapho ku-asphalt ngaphandle kwewindi, futhi imizwa isondela ku-zero.
, izingxoxo, izingxoxo ...
Popularity of Roulette - ingxoxo yevidiyo enaleli gama isivele yaziwa kabanzi - iba uphawu lwale ndlela yokuxhumana. Izindlela eziningi, ukusetshenziswa kwekhompyutha komphakathi wethu, i-Intanethi efinyelelekayo, kanye nokushintsha kokugcizelela kudlala indima. I-roulette yengxoxo yamahhala ijabulisa abahlaseli, kepha abathandi bakhuluma ngendlela efanayo kuze kube sekuseni.
: Ithuba lokusebenzisa ingxoxo liyindlela ehlukile ehlukile. Ngakho-ke, ukuqala ingxoxo, awudingi ukwenza inqubo ende yokubhalisa, futhi lokhu kumangalisa nje. I-Chatroulette itholakala mahhala mahhala, futhi ungaxhumana ne-interlocutor cishe khona manjalo. Inani labasebenzisi liyakhula nsuku zonke, okwandisa ithuba lokuhlangana nomuntu othakazelayo futhi uzinikeze izingxoxo ezingokoqobo isikhathi eside.
Izingxoxo nomuntu ohamba naye
Kuyaziwa ukuthi ukuhamba ngesitimela kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo, futhi lokhu akuyona ingozi: umuntu osebenza njengohlobo lwe “vest” ulalela ngokungakhethi, unikeza izeluleko ezesabekayo futhi usiza ukunquma ezimweni ezinzima zempilo. I-Chatroulette iyithwali lakho elihamba ibanga elide, futhi umhambisi wakho ungumngane ofanayo.
Ubuhle bengxoxo yamahhala kaRoulette ukuthi wonke umuntu angasebenzisa yonke imisebenzi yayo. Akudingekile ukuba ngumsebenzisi we-Intanethi osezingeni eliphezulu ukuze ufunde imithetho yengxoxo yeRoulette. Izinguquko ezisuka komunye umsebenzi ziye kwelinye zenzeka ngokushesha futhi azinazo izithiyo, okusho ukuthi abaningi babandakanyeka kulolu hlobo lokuxhumana.
Society, ihlukaniswe yisisekelo sokuba ngaphansi kokunye noma enye yezingqimba zayo, kwesinye isikhathi ibeka uhlaka oluqinile. Yebo, ukuxoxa ngevidiyo kukunika ithuba lokweqa yonke imihlangano ekhona yezenhlalo futhi ube yilokho okufunayo. Unamahloni futhi unqume, uyakhanya futhi uphela amandla, uhlakaniphile futhi hhayi kakhulu - sonke singabantu abalambele ukuxhumana futhi bathola imbewu yabo kuyo. E-Russia yanamuhla kunenqwaba yabantu abakulungele ukuxhumana ngendlela ethokozisayo futhi bazitholele izinzuzo eziningi.
Use ye-Chat Roulette mahhala iba khona manje, unganqikazi!
Russian ingxoxo yevidiyo yokuqomisana iyisikhathi sokushintsha impilo yakho futhi uqale ukuxhumana nabantu nsuku zonke. Ingxoxo yevidiyo yokuqomisana izoba ukutholakala kwangempela, futhi idlulisele phambili ezweni elisha, futhi ukuqomisana ngevidiyo engxoxweni kuzoba ngumvuzo wesibindi.
Umuntu uhlala ezweni lokuxhumana njalo. Kepha kukangaki singekho isikhathi esanele noma hhayi umuntu ofanele wokukhuluma ngezinhlungu. Manje zonke izindaba ezinjalo zixazululwa ngaso leso sikhathi! Kwanele ukusebenzisa insiza yengxoxo ye-roulette yaseRussia nge-Intanethi ukuthola i-interlocutor enhle kakhulu futhi nje ukhulume.
Iqiniso elisha lenkulungwane yesithathu - amakamelo wengxoxo yevidiyo online. Izingxoxo nganoma yisiphi isikhathi sosuku zizonikeza injabulo kuwo wonke umuntu ongakayitholi ifomethi yakhe yokuxhumana. Ingxoxo yevidiyo ebukhoma yabesilisa nabesifazane beminyaka ehlukene kanye nama-social Status - okusha ku-World Wide Web.
iyinsizakalo ethokozisayo nelusizo ekuvumela ukuthi ujwayelane nomuntu othumelayo othakazelayo futhi usebenzise isikhathi sakho sokuzilibazisa ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Ingxoxo yeRoulette ngaphandle kokubhalisa ikuvumela ukuthi uqale ukuxhumana ngokushesha. Wena ngokwakho unquma isikhathi sobudlelwano obusha futhi awuthwali noma yiziphi izibopho kumlingani wengxoxo oqondile. Umgomo oyisisekelo wevidiyo yevidiyo ukusesha okuzenzakalelayo kwe-interlocutor efanelekile. Iseshini ngayinye yevidiyo ihlukile futhi ihlukahlukene!
Bangaki kithi abangaphuma ngaphandle, bahlangane nothile futhi benze abangane, noma nobudlelwano? Amayunithi! Kepha konke kuyashintsha lapho siya online. Lapho, emigwaqweni ebonakalayo, singatholana nomuntu ozintshisakalo zakhe zihambisane nezethu. Futhi kulabo abathanda nje ukuxoxa, kunezingxoxo.Ngempela, kwi-Intanethi, wonke umuntu ulwela ukuzakhela isithombe esihle. Kepha ungalahli ithemba! Ingxoxo yevidiyo izosiza ukuxhumana kwi-Intanethi nomuntu ophilayo, hhayi ngesithombe esinesidlaliso kanye ne "avatar".
Ukuxhumana kwi-Inthanethi futhi ikakhulukazi ezingxoxweni kuvame ukusiza abantu abadumile ukuba baziveze, baqede izinkinga zokuxhumana futhi benze abangane abasha ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba, futhi mhlawumbe bathande impilo. Kepha kuyenzeka futhi ukuthi sibanjwe ngumsizi onobuthi “ngemuva” kokuthi “sikhulume” nomuntu ongafani naye ezingxoxweni zevidiyo - angifuni ukuhlala kwi-Intanethi! Ngabe ungahlukanisa kanjani "ama-troll" kusuka kuma-interlocriers anele? Yiziphi izimfanelo okufanele umphikisi wakho abe nazo engxoxweni yevidiyo nokuthi ungazazi kanjani ngokufanelekile ekuxhumaneni kwi-Intanethi, lesi sihloko sizosho.
Yini ingxoxo yevidiyo? Labo abajwayelene nezici zalolu hlelo kusuka ngaphakathi bangazikhethela izimpendulo zalo mbuzo ngezindlela ezihlukile. Iningi liqinisekile ukuthi le yindlela nje yokusebenzisa isikhathi sabo sokungcebeleka, lokhu ukuzijabulisa, akukho okunye. Kodwa-ke, kukhona nalabo abakwazile ukubona engxoxweni yevidiyo impumelelo engaphezulu namathuba. Thola enye ingxenye yakho, unwebise imisebe yakho, uzithole ususekhoneni elihlukile ngokuphelele lomhlaba. Futhi lokhu kukude kubo bonke. Ungafunda kanjani ukukhomba izinzuzo ezinkulu ngokusebenzisa ingxoxo yevidiyo?
Sifuna ukuxoxa futhi angifuni ukuchitha isikhathi ekubhalaneni isikhathi eside, khona-ke ingxoxo yewebhu ingindlela enhle kuwe. Ngosizo lwale sevisi, izwe lonke likuvulele, awunamkhawulo wesikhathi, ungakhuluma ngendlela othanda ngayo, kuyajabulisa njalo ukuxhumana nabantu abahlukahlukene. Akunasidingo sokucabanga ukuthi ungabhala kanjani, ubhale ini, noma ngabe uyathakazelisa ku-interlocutor - vele uxhumane ngekhamera yewebhu futhi ujabulele ingxoxo.
Yini ekhangayo kubasebenzisi ngengxoxo engaziwa yokuthandana? Mhlawumbe, ngeqiniso lokuthi wonke umuntu obahlanganyeli angakwazi ukukhululwa ngokuphelele futhi aphendukele kuye. Ngasikhathi sinye, akunandaba ukuthi uyisiphi isimo empilweni yangempela, noma ngabe uyindoda yomndeni noma cha - engxoxweni yevidiyo wonke umuntu uyalingana, uvuleke ngokuphelele, futhi akazimele nakancane kunoma ngubani.
Finyelela ingxoxo yevidiyo nabasebenzisi abangahleliwe. Vula ikhamera bese uqala ukuxoxa nezinkulungwane zabasebenzisi ongakaze ubabone!
Siyakwamukela emhlabeni we-ChatSpin. Lolu uhlelo lokusebenza lengxoxo yevidiyo evamile ekunika ithuba eliyingqayizivele lokuxoxa namashumi ezinkulungwane zabantu ongabazi emhlabeni jikelele.Ukuze uqale ukuxhumana, kuzodingeka wenze okukodwa nje bese uvula ikhamera yakho yewebhu. Ngaphezu kwalokho, uzothola inani elikhulu lezinto ezisebenzayo namathuluzi azokuvumela ukuthi uthathe ukuxhumana kuya ezingeni elisha lonke futhi wenze ingxoxo yevidiyo ijabulise futhi ibengejwayelekile!
Khetha okokuhlunga okuningi nemiphumela, okwenza inqubo yokuxhumana nabantu ongabazi engxoxweni icace kakhudlwana futhi ijabulisa.
Ukuzikhethela kobulili kwe-interlocutor
Xhumana kuphela namantombazane ngokukhetha inketho ezifanele phezulu kwewindi lokuxoxa.
Xhumana nabasebenzisi abavela esifundazweni esisodwa, kanye nalabo abakhuluma ulimi lwakho.
Uzodinga ukwenza i-, chofoza okukodwa nje u-. ukuqala ukuxoxa nomuntu ongamaziyo usebenzisa i-webcam yakho. Ngaphezu kwalokho, uzothola ukufinyelela kumakhulu wemisebenzi ehlukahlukene namathuluzi azokwenza ukuxoxa kwakho kujabulise futhi kube ngokungajwayelekile!
Shintsha umthombo wesisindo nomthamo wekhamela yakho yewebhu, futhi ulungise ivolumu yezwi lomuntu okhuluma naye.
I-roulette yengxoxo yethu ye-
itholakala kuwo wonke umuntu nawo wonke umuntu ngokuphelele.
Singaceli imininingwane yekhadi lakho lasebhange noma isiqinisekiso senkokhelo. Ungasebenzisa i-ChatSpin ngaphandle kokubhalisa. Le ndlela ikuvumela ukuthi ugcine ubumfihlo bakho lapho uxhumana nabantu ongabazi engxoxweni yevidiyo, unikeze ukungaziwa ngokuphelele. Awusoze wanikeza imininingwane yomuntu efana nenombolo yocingo noma ikheli lekhaya. Ngaphezu kwalokho, sincoma ngokuqinile ukuthi abasebenzisi bethu bangalokothi badalule imininingwane enjalo engxoxweni, noma ngabe ungubani wakho.
Ukuqoqwa kwesikrini se-
Qala ukuxhumana manje
Konke kulula kakhulu. Kuzokuthatha isikhashana nje ezimbalwa ukuqala ukuxhumana nabantu ongabazi abangama-97,009 usebenzisa ikhamera yakho yewebhu!
roulette yengxoxo yaseRussia yokuxhumana kwi-Intanethi
Lapho uzothola ulwandle lokuxhumana kwe-inthanethi uthando noma ubungani. Obajwayele ama-video bakhethwa ngabantu abazisa isikhathi, abahlala ku-inthanethi iningi lempilo yabo. I-chat roulette emhlabeni wonke ihlanganisa izindawo futhi ibhekwa njengenye yezindlela ezilula, ezisheshayo futhi ezilula kakhulu zokwazana.
Free chat chat online ngaphandle kokubhalisa
Ngokuba lula kwabasebenzisi, ungaxhumana nathi ngaphandle kokubhalisa, vele ungene ngemvume kuma-akhawunti akho ezinkundleni zokuxhumana. Lapha uzothola ukuxhumana okumnandi kuphela nabafana namantombazane! I-Chat roulette Chat izophinda ihehe kubantu abaningi ngemiklamo yayo emnandi, isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula nokusebenza okubanzi.ru
Usebenzisa insiza efana nengxoxo yevidiyo nomuntu okungahleliwe, ungaxoxa nomuntu kusuka kunoma yiliphi ikhona lomhlaba wethu usebenzisa i-webcam ngesikhathi yangempela. Le nto eyenziwe kabusha yaheha abasebenzisi bohlelo ngenxa yokungajwayelekile kwayo, ngoba kujabulisa kakhulu ukuxhumana nomuntu ovela kwelinye idolobha noma izwe.
Ngendlela, sengibhalile ngesihloko esifanayo lapha:
Ukuze usebenzise ezinye izingxoxo zevidiyo, umenyelwa ukubhalisa, okuthatha imizuzu embalwa yesikhathi sakho. Ngemuva kokubhalisa, ungajabulela ukuxhumana nge-webcam enenjabulo!
video4at.ru Ividiyo roulette yengxoxo yeRussia
Ingxoxo yevidiyo ye-TOP kakhulu ye-http: //video4at.ru. Akukho ukukhangisa. Kukhona imodi ye-Premium. Ungakhetha abahluzi ngedolobha noma izwe. Angisho ukuthi ungathenga ikhodi lapho futhi unikeze othile ukufinyelela kwe-Premium.
Kukhona nengxoxo yombhalo nenqwaba enkulu yamaphrofayili namantombazane.
Kazakhstan ingxoxo "GYR-GYR"! Ingxoxo yevidiyo isuselwa kunjini yakudala kusuka ku-mail.ru, esanda kufakwa ekhasini. Leli khasi libekwe njengengxoxo yevidiyo yaseKazakhstan, kepha akekho ozihluphayo ukuthola umhambisi ovela eRussia noma e-Ukraine. Iwindows yokubuka elula ye-interlocutor, inkinobho ye-alamu, konke kunjengoba kufanele.
Le ngxoxo ingxoxo yevidiyo evamile yaseRussia futhi iyindlela yokuxhumana yentsha yanamuhla. Le ngxoxo ihlelwe ngendlela elula. Amafasitela amabili akuvumela ukuba uzibone wena kanye nomsabalalisi wakho esikrinini sokuqapha kwakho. Eduze, kunewindi lokuthumela umyalezo komunye noma kwenye i-interlocutor.
Futhi, ungamaka ubulili bakho, kanye nobulili bomuntu owuthandayo, khona-ke usesho luzokhawulelwa kudatha oyinikezile.
Le sayithi ikunikeza ithuba lokuxhumana usebenzisa i-webcam ngasikhathi sinye nabantu abaningana ngaphandle kokubhalisa. Kuleli sayithi ungakhetha i-avatar yakho, khombisa ubulili, ubudala nedolobha. Ngokuya ngamapharamitha afanayo, ungathatha i-interlocutor.
Njengoba usuchazile ikheli lakho le-imeyili ne-password, ungagcina uhlamvu lwakho esizeni, futhi ugcine oxhumana nabo nezingxoxo ezidingekayo.
Le sayithi, njengazo zonke ezinye izingxoxo zevidiyo, ikunikeza ithuba lokuxoxa nabantu abasha abathakazelayo abavela kunoma yiliphi idolobha emhlabeni wethu. Kuzofanele ushiye leli sayithi uma unganqumi ukuvumela ukufinyelela kumakrofoni nekhamera yewebhu yekhompyutha yakho. Ukubhalisa kuleli sayithi udinga ukufaka ikheli lakho le-imeyili bese ucacisa i-password ozoyifaka, khona-ke ungazikhethela wena umhambisi ohehayo.
Le sayithi inemithetho yayo, ngakho-ke udinga ukubazi ukuze ungahlukani.
Le ngxoxo yevidiyo ishonile .. Lolu hlelo lokusebenza lwe "Video chat nge-chat chat" lukusize wenze abangane abasha noma waba nesikhathi esimnandi. Konke obekudingeka kuwe ukuxhuma i-webcam bese ucindezela inkinobho "yokuqala". Ngemuva kwalokho, uhlelo lokusebenza lukhetha umlingani wakho. Uma ungamthandi umlingani, ungaqhubeka ngokuthungatha umuntu obekhuluma naye.
Lolu hlelo lokusebenza alunabo omengameli, ngakho-ke kuleli cala ngeke uthole umshuwalense ngokumelene nezigcawu ezamukelekile ukuze ubukwe abantu abaneminyaka engaphezu kwe-18 ubudala. Njengazo zonke izingxoxo, ungashintshanisa imiyalezo ngaso leso sikhathi.
Lolu hlelo lokusebenza lushonile futhi, futhi abantu bayashintsha kulo baye kwezinye izinsiza. Le ngxoxo yevidiyo yenzelwe futhi ukuxhumana nge-webcam. Akukho okungeziwe - amawindi amabili wokusakaza ividiyo, iwindi lokuthumela imiyalezo kwi-interlocutor, kanye nekhono lokusesha i-distlocutor entsha. Engasindi futhi kulula ukuyisebenzisa futhi ayidingi ukubhaliswa kwangaphambili.
Ingxoxo yevidiyo - iroulette, ikunikeza ithuba lokuxoxa nabantu abasha, ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Ngemuva kokubhalisa kusayithi, ungaqala ukuxhumana ngokuchofoza inkinobho ethi "sesha i-interlocutor". Futhi kuleli sayithi ungabuka amaphrofayili evidiyo yomsebenzisi, azokwenza lula ukukhetha kwakho kwe-interlocutor.
Akukho lutho oluyinqaba esizeni, abathuthukisi bazame ukwenza ukuxhumana kwakho kube okunethe xaxa futhi kujabulise.
Le nsiza, ngokudabukisayo, nayo, seyilaxekile. Lesi siza senziwe ngesiNgisi, ngakho-ke, abasebenzisi abangenalo ulwazi lolimi lwesiNgisi bazokuthola kunzima ukuqonda izingxenye zengxoxo yevidiyo. Ingxoxo yevidiyo, njengayo yonke into, ikuvumela ukuthi ushintshisane ngemiyalezo, kanye nokubona umlamuleli ngesikhathi sangempela.
Ingxoxo yevidiyo ye-
ethi "Masikhulume" ikuvumela ukuthi uxoxe nabantu ongabazi ngokuphelele kunoma yiliphi ikhona lomhlaba wethu. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa ingxoxo, imakrofoni noma ikhamera yewebhu. Inkonzo yalesi siza ilula kakhulu, futhi ayidingi ukubhaliswa nezinye izilungiselelo zokuxoxa
Ukuchofoza inkinobho "thola i-interlocutor" ungaqala ukuxhumana. Futhi, i- "Asikhulume" ihlinzeka ngokuxhumana kubasebenzisi baseVkontakte, kepha uzodinga ukubhalisa ngalokhu. Ukuxhumana kulesi siza kulula kakhulu futhi kumnandi!
Le ngxoxo yi-analogue yaseRussia yengxoxo ye-roulette, insizakalo ethandwa kakhulu yokuthandana kwamavidiyo ngokushesha. Akuyona into elula ukubhalisa ngaphambi kokuqala ingxoxo, futhi futhi, uma ungavumeli ukufinyelela kumakrofoni kanye ne-webcam, kuzofanela ushiye leli sayithi.
Ukujwayelekile, ingxoxo ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, akukho lutho oluyinqaba esizeni, ngakho-ke ongaqalayo angakwazi ukuthola kalula uhlelo lwengxoxo ye-roulette.com
Lesi isiza somqondo wengxoxo yevidiyo yokuqala, umbhali wayo aziwa kakhulu. Ingxoxo yevidiyo eyanele kunazo zonke, kwezingu-20 Okulandelayo angizange ngihlangane nokuzenyeza okukodwa. Abantu abaphilayo. Le ngxoxo yevidiyo yenzelwe abasebenzisi bamazwe ahlukene, kepha yenzelwe ngesiNgisi. Kuzoba lula ukubaqalayo aqonde uhlelo lwengxoxo yevidiyo, labo abaziyo imishwana yokuqala yolimi lwesiNgisi bangazama. Intshisekelo yalesi siza ihlala ekutheni i-interlocutor isuka kwelinye izwe, futhi uma ungakhulumi izilimi zakwamanye amazwe, kungenzeka ukuthi ukujabulele ukuxhumana okunjalo.
Ranetki ru - ingxoxo yevidiyo.
Chat - I-top 20
Chatroulette Sites iyipulatifomu ehlangene yazo zonke izingosi ezinhle kakhulu njenge-Chat Roulette. Sichithe amahora amaningi ku-Intanethi ukuthola izingxoxo ezingahleliwe ezithandwa kakhulu futhi siqoqe konke kuwe endaweni eyodwa. Manje, ungakujabulela ukuxoxa ngevidiyo emapulatifomu ahlukahlukene nakho konke lokhu kusayithi elilodwa!
Ngayo yonke le mithetho emisha ye-Chat Roulette, abantu abavela kuwo wonke umhlaba bafuna izindlela ezintsha ezingama- Chat Roulette. ukuhlangana nabangane abasha noma ukuzijabulisa nabantu ongabazi. Kulezi zingosi kunemithetho embalwa kakhulu futhi nabasebenzisi besifazane abaningi, hhayi nje abafana kanye nenani elikhulu lemithetho yokuthi ngesinye isikhathi ungavinjelwa ngesizathu esingaziwa!
Our lukuhlinzeka ngezingosi ezingama-20 ezingcono kakhulu ezingxoxo ezingahleliwe, i- futhi le yindlela enhle yokuxoxa nabantu ongabazi ngaphandle kokuzihlukumeza ngokuqagela ngokuthi iyiphi indawo ethandwa kakhulu, futhi ngaphandle kokuchitha isikhathi sakho ukuyifinyelela ngokulinga nangephutha. Ukuze usebenzise isiza, mane uchofoze kwesinye sezithombe ohlangothini lwesokunene futhi unikeze ukufinyelela kwi-webcam yakho, futhi uzoxhuma ngokushesha kubantu abangahleliwe esizeni abaku-inthanethi.
Zonke izingosi ezibalwe lapha zibukezwa yithi, futhi sinikeza incazelo ngayinye yazo. Manje, akudingeki uchithe isikhathi sakho, futhi unganquma kalula ukuthi iyiphi enye indawo engaba nentshisekelo kuyo esizeni sethu. Ngakho-ke ulindeni? Chofoza isithonjana ngakwesokunene bese uqala ukuxoxa nezinkulungwane zabasebenzisi manje!
Ingxoxo yevidiyo yababili.
Ingxoxo yevidiyo yababili abakwa- izokusindisa kwisizungu, esiba yisishayo sekhulu lama-21. Lo muzwa uthinta abantu beminyaka ehlukene: intsha, uma kungekho kuqonda ukuzwana nabazali bayo; abantu abasha abalahlekelwe yimindeni yabo noma umsebenzi; abantu beminyaka evuthiwe ababengenampilo; abantu abadala izingane abazikhohliwe. Wonke umuntu uzosiza i-Intanethi, njengezindlela zesimanje zokuxhumana emhlabeni wonke, okuyinkonzo efana nokuthi ake sixoxe noma sixoxe ngevidiyo ngababili.Asikho isidingo sokufaka uhlelo, vele ufake umbuzo wakho kubha yokusesha yesiphequluli:
ingxoxo yevidiyo engaziwa yezimbili, i-
yababili ngaphandle kokubhalisa, i-
chat ngaphandle kokubhaliswa kwamahhala, i-
ixoxa ndawonye nge-webcam mahhala,
chat kanye namantombazane aseRussia.